शुक्रवार, नोभेम्बर ०,, २०२० आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 बिल डासन
हिजो गोवालाले घोषणा गर्यो वाल्ट डिज्नी, इंक। ग्रहको सब भन्दा ठूलो ब्रान्ड मध्ये एकको साझेदारी। त्यहाँ धेरै सन्देहकहरू छन् जुन सामाजिक मिडियामा विश्वास गर्दैनन् - भौगोलिक सामाजिक अनुप्रयोगहरू जस्तै गोवल्ला, (चौका र फेसबुक स्थानहरू) छोडिदिनुहोस्। किन यो साझेदारी अर्थ राख्छ?
पहिले, यो बुझ्छ, किनभने गोवाला प्रयोगकर्ता सment्लग्नताको बारेमा हो! यो सेवा, जसको अनुप्रयोग मेरो आईफोनमा स्थापना गरिएको छ, चेक इन गर्न सजिलो बनाउँदछ तपाईंको शहर र विश्वभर स्थानहरूमा। तपाईंको मनपर्ने हौंट्स, सुझावहरू र फोटोहरू साझा गर्नको लागि बदलीमा, तपाईंलाई तपाईंको पासपोर्टमा टिकटहरू र स्थानमा छोडियो भर्चुअल आईटमहरू द्वारा पुरस्कृत गरिन्छ। यो भू-क्याचिंग, स्क्याभेन्जर हन्ट्स, र टुरिस्ट नक्शाको उत्कृष्ट म्यास-अप हो - एउटा सुन्दर चित्रण प्याकेजमा बन्डल।
डिज्नी पार्कहरूको लागि, यस प्रयोगकर्ता संलग्नता अर्को माध्यममा अनुवाद गर्दछ ट्र्यापको दौरान स engage्ग्रह विस्तार गर्न, पाहुनाहरूको मनोरन्जन गर्न र तिनीहरूलाई अन्वेषण गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्। वाल्ट डिस्ने वर्ल्डमा मेरो पहिलो यात्रामा मैले EPCOT पासपोर्ट किनें, जसले मलाई विश्व शोकेसमा सबै countries देशहरूको स्मारिका पसलमा लग्यो, जहाँ म कास्ट सदस्यबाट टिकट र अटोग्राफ पाउन सक्दछु। [फेरि अन्तिम वाक्य पढ्नुहोस्, बजारहरू।] मैले मेरा बाबुआमालाई different बिभिन्न स्टोरहरूमा तानेर टिकटको सट्टामा! यो डिज्नी गुणहरूको सबै भन्दा पुरानो उक्ति हो - "सबै सवारीहरू उपहार स्टोरमा समाप्त हुन्छन्।"
डग र म हाम्रा ग्राहकहरुलाई प्रयोगकर्ताहरुलाई स engage्लग्न गर्न र रूपान्तरण मापन गर्न सबैभन्दा कुशल साधन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछु। बढ्दो मोबाइल र डिजिटल विश्वमा गोवाल्ला जस्ता उपकरण किन प्रयोग नगर्ने? प्रक्षेपणको एक भागको रूपमा, डिज्नीले गोवाल्ला-सुविधायुक्त रिसोर्ट ट्रिप्स अतिथिहरूलाई प्रदान गरेको छ जसले पाहुनाहरूलाई सबै पार्कमा कुञ्जी सवारी (र स्टोरहरू) मा अगुवाई गर्दछ। विनिमयमा, डिज्नीले पाहुनाहरू भ्रमण गर्ने स्थानहरूको स valuable्ख्यामा मूल्यवान तथ्या receiving्कहरू प्राप्त गर्दैछ, कुन सवारीहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छन्, कुन पार्कहरूले अधिक यातायात पाउँछन्, आदि। एक पटक परम्परागत डेमोग्राफिक डाटाको साथ जोडी जो डिज्नीले पाहुनाहरूमा संकलन गर्छन्, उनीहरूसँग अमूल्य छ जानकारीको धन, जुन पालैपालो ग्राहकहरु लाई पुनः संलग्न गर्न र अधिक कुशल रूपान्तरण बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मार्केटिंगको मिडिया लगातार परिवर्तन हुन्छ, तर प्रयोगकर्ता संलग्नता स्थिर रहनु पर्छ। कुन उपकरणहरू उपलब्ध छन् जुन तपाईंको कम्पनीले सment्लग्नता र रूपान्तरण सुधार गर्न परीक्षण सुरू गर्न सक्दछ?
बिल डासन एक ईमेल मार्केटिंग र ईमेल अनुप्रयोग विशेषज्ञ हो, दुबै ठूला कम्पनीहरू र सफ्टवेयरसँग उनीहरूको ईमेल एकीकरण, उपयोगिता र डेलिभरेबिलिटीमा सेवा प्रदायकको रूपमा परामर्श गर्दछन्। बिलले केहि ठूला स online्गठनहरूसँग काम गरेको छ अनलाइन सहित Zappos र walmart। उनी र उनकी श्रीमती कार्लाको आफ्नै एजेन्सी छ र Dog कुकुर डिजाइन.
ट्विटरको साथ तपाईंको हेल्पडेस्क एकीकृत गर्नुहोस्